Xukuumadda Somaliland Oo Sii Deysay Maxaabiis Lagu Qabtay Dagaalkii Kalshaale Iyo Munaasibad Dib Loogu Aasay Berkeddihii Muranka Dagaalka Xudunta U Ahaa | Araweelo News Network (Archive) -
Burco(ANN) Xukuumadda Somaliland ayaa sii deysay maxaabiis lagu qabtay dagaaladii u danbeeyay ee dhowaan ciidanka qaranka somaliland iyo malayshiyada SSC ee taageerada ka haystay maamulka budhacd-badeeda ee xaruntiisu tahay Garoowe, ku dhexmaray duleedka Buuhoodle.
maxaabiistaa oo lagu qabtay weeraro kala duwan oo ay kusoo qaadeen ciidamada qaranka eek u sugan Duleedka Buuhoodle.
Maxaabiistaa la sii daayay oo tiradoodu ahayd 42 ayaa caawa gaadhay magaalada Buuhoodle oo si diiran loogu soo dhaweeyay. Kadib markii Wasiir ku xigeenka Arrimaha Guddaha Somaliland iyo xildhibaano deegaanka Buuhoodle kaga jira golayaasha Baarlamaanka Somaliland lagu wareejiyay, iyadoo laga qaaday xabsiyada Mandheera iyo Burco.
Sii deynta maxaabiistaa ayaa kusoo beegantay munaasibada balaadhan oo maanta ka dhacday deegaanka Kalshaale ee xudunta u ahaa dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka Buuhoodle, taas oo ujeedadeedu ahayd in la fuliyo amar kasoo baxay Madaxweynaha Somaliland oo sheegayay in la aaso gebi ahaanba Berkeddihii muranka iyo khilaafka dagaalka horseeday ee kalshaale oo ahaa saddex bekeddood.
.Xafladii loo sameeyey aaska Berkeddahaa ee maanta lagu qabtay deegaanka kalshaale, waxaa ka qaybgalay Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Somaliland sida wasiiradda wasaaraddaha warfaafinta, gaashaan-dhigga iyo duulista hawada, afhayeenka madaxtooyada, xildhibaano iyo salaadiin kala duwan, balse dadka deegaanka Berkeddaha lahaa ee Qorilugud ayaan ka xaadirin munaasibadaa.
Wasiirka wasaaradda gaashaan-dhigga Axmed Cali Cadami oo ka hadlay halkaa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in la fuliyo amarkii madaxweynaha Somaliland ee la xidhiidhay in la aaso Berkeddaha, isla markaana deegaanka Kalshaale laga dhigo dhul daaqsimeed.
Wasiirku wuxuu sheegay in dagaalkii labada beelood ee walaalaha ah ee halkaasi wada dagaa uu ka bilaabmay saddex berkedood oo ay ku dhinteen dad badan oo qiimo lahaa, waxaanu dhambaal tacsi ah u diray dadkii ku dhintay dagaaladii u dhexeeyey labada beelood.
Wasiirka wasaarada warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland Axmed Cabdi Xaabsade ayaa sheegay in baabinta berkeddahu ay bilow u noqon doonto nabadeynta labada beelood ee halkaa wada degan, waxaanu dhambaal tacsi ah u diray qoysaskii labada beelood ee dadku kaga dhinteen iska hor imaadyadii deegaankaasi ka dhacay.
Wasiirka Warfaafinta iyo Wacyigelinta Axmed Cabdi Xaabsade oo ka mid ahaa masuuliyiinta ka qaybgalay hawsha nabadaynta ee lagu aasay Berkeddahaa oo waraysi la xidhiidha arrintaa siiyay la’aanta Af-soomaaliga ee idaacadda VOA, waxa uu yidhi, “Waxaan u joognaa madaxweynaha Somaliland ayaa amar ku bixiyey in meeshii la isku haystay ee Kalshaale ee Berkeddaha laga qoday ee qolana lahayd yaan la qodin qolana lahayd waanu qodaynaynaa ee dagaalku ka dhacay ayuu madaxweynuhu amar ku bixiyey in la aaso oo meeshu xoolo daaqeen noqoto.Berkadihii waanu wada aasnay oo cagafyo ayaanu gelinay.”
Xaabsade oo ka jawaabayay su’aal ahayd in dhul daaqsimeedku uu dhibaato kale ka dhalan karto oo dadku ay daaqa isku qabsan maayaan, waxa uu yidhi “ Ma markii horeba waa la wada deganaa markaa daaqu waxba keeni maayo.”
Sidoo kale afhayeenka madaxtooyada Somaliland C/laahi Maxamed Daahir oo munaasibadaa ka hadlay wuxuu sharaxaad ka bixiyey go’aankii madaxweynaha isagoo yidhi, “ Go’aanka madaxweynuhu wuxuu ahaa go’aan xal ah, go’aanka sharciga ahi wuxuu ahaa kii ay gaadheen dadkii madax dhaqameedka ahaa, salaadiinta ahaa ee labada dhinacaba wada fadhiyeen nasiib darro go’aankii halkaasi laga soo saaray wuu fuli waayay. Madaxweynuhu isagoo nabadda xigsanaya oo tixgelinaya in dadka labada dhinacba ay yihiin dadkiisii wuxuu qaatay qaraar adag wuxuu qaatay qaraar ahaa in berkadaha la aaso, go’aankaasi inuu ahayn kii lagu dhexdhexaadiyey hase yeeshee, wuxuu ahaa mid madaxweynuhu qaatay.”
Afhayeenka deegaanka Qorilugud Cali Dhimbiil Aadan, oo shir-jaraa’id ku qabtay degamadaa waxaanu yidhi “ Go’aanadda dawladda Somaliland ka soo baxay ee go’aan madaxweyne ahaa ee Kalshaale lagu aasay waa mid dawladeed laakiin ma aha go’aan beeshani leedahay, deegaankan la aasay wuxuu yahay deegaankii beeshayda shareecada islaamku u xukuntay hase yeeshee, lagaga aasay go’aan dawladeed, go’aanku haddii uu xal nabadeed yahay waanu raacsan nahay, waayo haddii go’aanka dawladda aan la raacin waxay noqonaysaa dhibaato.”
Afhayeenku wuxuu sheegay in aanay qaadanayn kharashkii madaxweynuhu sheegay in loo celinayo kharashkii ka galay berkedaha la aasay, balse ay taa diideen oo ay nabadda iyo go,aanka madaxweynaha ee Xukuumadda qaateen. Sidaana ku diideen kharashkii loo celin lahaa.